RASMI: Chelsea oo ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska Thomas Tuchel – Gool FM
RASMI: Chelsea oo ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska Thomas Tuchel
(London) 26 Jan 2021. Chelsea ayaa xaqiijisay in Thomas Tuchel uu yahay tababaraheeda cusub ee kooxda isagoo qalinka ku duugay heshiis 18 bilood ah.
Lampard ayaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyay Isniintii kaddib qaab ciyaareed xun oo uu soo bandhigay taasoo ka dhigtay inay ku jiraan kaalinta 9-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League isla markaana ay 11 dhibcood ka hooseeyaan kooxda hoggaanka heysa ee Manchester United.
Tuchel, oo shaqo la’aan ahaa muddo bil ah kaddib markii ay Paris Saint-Germain ka fasxday shaqada, ayaa toddobaadyo kahor inta aan shaqada laga ceyrin Lampard, wuxuu heshiis la sii gaaray Blues.
Chelsea ayaa ku xaqiijisay war rasmi ah oo ay soo saartay:
“Tuchel waxaa loo magacaabay inuu noqdo tababaraha cusub ee Chelsea, wuxuuna u dhaqaaqi doonaa Stamford Bridge kaddib labo sano iyo bar uu la joogay Paris Saint-Germain.”
Thomas Tuchel ayaa dhankiisa ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu dhameystiray heshiiskan cusub wuxuuna yiri:
“Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Chelsea kalsoonida ay na siisay aniga iyo shaqaalaha, Waxaan ixtiraam weyn u haynaa wixii uu ii soo bandhigay Frank Lampard, isla mar ahaantaana waxaan sugi la’ahay inaan la kulmo kooxdeyda cusub tartanka ugu muhiimsan kubadda cagta”.
Thomas Tuchel ayaa bixin doona tababarkiisa ugu horeeya ee kooxda Chelsea caawa, waxana uu diyaar u noqon doonaa in uu hoggaamiyo kulanka bari ee horyaalka Premier League oo ay la ciyaari doonaan kooxda Wolves.
Richards oo u tilmaamay Man City saxiixa xiddig ku hoggaamin kara hanashada horyaalka Premier League
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Southampton iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey